2077 कार्तिक 07 शुक्रबार
अघिल्ला वर्षहरूमा जति पनि आस देखिएन
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग गरिएको कुराकानि बजेटको छमहिने अवधि पार भएको छ । कस्तो रह्यो यो यात्रा ? हामीले अपेक्षा गरेअनुसार ८ प्रतिशको आर्थिक वृद्धिका लागि विकास खर्च हुनुपर्ने थियो त्यो भएन । निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी हुन सकेन । लक्ष्य भनेको सरकारले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना ल्याउँदा यो चालु आवसम्मका ९४ अर्ब खर्च गर्ने...
स्थानीय तहले लगानीमैत्री र निजी क्षेत्र आकर्षित गर्ने कर प्रणाली अपनाउनु: अर्थमन्त्री खतिवडा
तपाईंले नेपाली अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । यो दुई वर्षमा अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने के कस्ता प्रयास भए ? मेरो प्रयास भनेको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो । आयातमा आधारित आर्थिक गतिविधि, विकास गतिविधि, राजश्व प्रणाली, रेमिट्यान्समा आधारित तरलता र बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको स्थिति, हचुवामा आधारित...
‘मेरो पति खै ?’ भन्दा अग्नि सापकोटा भागे’
तपाईको पति कहिलेदेखि माओवादीले अपहरण गरी हत्या गरेका हुन् ? २०६२ साल वैशाख १६ गते माओवादी कार्यकर्ताहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकबाटै मेरो पति अर्जुनबहादुर लामालाई अपहरण गरी लगेका हुन् । व्यवस्थापन समितिको बैठकमा चुनावको कुरा भइरहेको रहेछ । मेरो पति काठमाडौंमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई यादव भन्ने व्यक्तिले फोन गरेर बोलाएछ...
‘राजपा सरकारमा आउन सक्छ’
नेकपाको आन्तरिक जीवनले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्छ । बहुप्रतीक्षित केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नेबित्तिकै सर्नुपर्ने कारण के हो ? तयारी राम्रो हुन सकेन । स्थायी समितिको बैठक बस्दा धेरै साथीले राम्रा राम्रा सुझाव दिनु भएको थियो । सरकारको समीक्षा पनि गर्नुभएको थियो । त्यो बेला पनि बैठक भ्याइँदैन कि भन्ने थियो । त्यो सुझावलाई पनि...
कानुनको दुरुपयोग गरिए प्रहरी र अदालतमाथि नै प्रश्न उठ्छः अरुणराज सुमार्गी
काठमाडौं मंसिर, १– निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। कात्तिकमा बस्ने भनिएको विशेष साधारणसभा स्थगित गरिएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतस् अध्यक्ष बन्‍ने स्थिति पैदा भएको छ भने अन्य पदका आकांक्षीले पनि छलफल तीव्र पारेका छन्। विशेष साधारणसभा किन डाकियो र किन स्थगित...
स्थानीय तहमा अपुग कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुलाउँदै लोकसेवा
काठमाडौं जेठ, १४– सात प्रदेशमा १४ हजार ६ सय ७२ कर्मचारी आवश्यक रहेको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगलाई पठाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ । पाँच सय ५५ स्थानीय तहबाट माग भएका कर्मचारीको संख्या मन्त्रालयले लोकसेवालाई पठाएको हो । मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार लोकसेवाले आगामी १५ जेठदेखि...
उद्योगीलाई दिइएको बिजुलीको पैसा किन उठाएनन् कुलमानले ? अमनलाल मोदी सांसद, नेकपा
काठमाडौं जेठ, १३– सार्वजनिक लेखा समितिमा तपाईं के भन्नुभएको थियो कुलमान घिसिङसँग के त्यस्तो विवाद उत्पन्न भयो ? सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापतिले रुलिंग गरेपछि सभापति आफैंले पनि केही प्रश्न तेस्र्याउनु भएको छ । त्यसपछि सचिव, डिएमडी र त्यसपछि कुलमानजी बोल्नु भएको थियो । उहाँहरु बोलिसकेपछि सांसदहरुले बोल्ने क्रममा मैले बोलेको हो ।...
भारत नेपालको पानी सित्तैमा उपयोग गर्न चाहन्छः डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, जलस्रोत विज्ञ
काठमाडौं जेठ, ६– डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल जलस्रोत विज्ञ हुन् । उनी नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पनि हुनुहुन्छ । अध्यापन, सरकारी सेवाका अतिरिक्त उनले १० वटा जति पुस्तक पनि लेखेका छन् । प्रस्तुत छ, डा. ढुंगेलसँग गरिएको कुराकानीको सारः तपाईं जलस्रोत मन्त्रालयको सचिव हुँदा, जलविद्युत उत्पादन वा विकासका लागि कस्ता अवरोध थिए ? – म ५२...
उपेन्द्र यादवले अब सरकार छाड्नै पर्छः रामरिझन यादव नेता, समाजवादी पार्टी नेपाल
काठमाडौं वैशाख, ३०– नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादीबीच एकता भइरहँदा तपाईं लगायत नयाँ शक्तिका केही नेताहरुले बेग्लै भेला गर्नुभयो । नेकपामा प्रवेश गर्ने हल्ला पनि चल्यो । वास्ताविकता के थियो ? नेकपामा प्रवेश गर्ने कुरा होइन । सामान्य चियापान गरेको हो । वास्तविकता यहि हो कि हामी नेकपामा प्रवेश गर्नका लागि भेला गरेको होइन । यो प्रकरणमा दुई...
उद्योगहरुले दोहोरो ब्यालेन्स राख्नु हुँदैन: अशोक शमशेर जबरा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिमालयन बैंक
काठमाडौं चैत– पछिल्लो समय बैंकहरुको अवस्थालाई कसरी नियालिरहनु भएको छ ? पहिला जस्तो अवस्था त छैन तर तरलता अभावको समस्या अझै बाँकी रहेको छ । अहिले बैकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर घटिरहेको छ । ब्याजदर घटाउन बाणिज्य बैंकहरु पनि दबाबमा परेका छन् । बिकास बैंकहरुले पनि अहिले ब्याजदर घटाईरहेका छन् । यसले गर्दा बााणिज्य बैंकहरु पनि व्याजदर घटाउन...
यो सरकार पाँच वर्ष टिक्दैनः कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा
काठमाडौं फागुन, २०– नेपाली कांग्रेसका युवा नेता रामहरि खतिवडाले वर्तमान सरकार आफ्नै विवादले ढल्ने दावी गरेका छन् । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालल कार्यदलका असन्तुष्ट सदस्यसहित माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमलगायतको समूहको चेपुवामा परेका छन् । यसको सिधासिधा अशर मुलुकमाथि परेको छ । यीनै सन्दर्भमा हामीले...
कांग्रेसको विकल्प कांग्रेस नै होः विनयध्वज चन्द नेता, नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं माघ, २८– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सरकारबिरुद्ध आन्दोलनमा छ । माघ २१ गते त उसले देशका ७७ वटै जिल्लामा प्रदर्शन गर्यो । कांग्रेसले कुनै हठातमा नभई लामो छलफलपछि सरकारबिरुद्ध सडक र सदनबाटै आन्दोलन उठाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले लोकतन्त्र मास्न खोजेको कांग्रेसको मुख्य आरोप छ । तर, कांग्रेसभित्रै यो आन्दोलनका बिषयमा...
नौ पासेहरु शासक हुँदा यस्तै होः डा. प्रेम सिंह बस्न्यात
काठमाडौं माघ, २८– डा. प्रेम सिंह बस्न्यात सीधा कुरा प्रष्ट बिचार राख्ने राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ । डा. बस्न्यातले यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालविरुद्ध कटाक्ष गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग भएको कुराकानीको सारः वर्तमान सरकारको शैली,गति र दिशा ठिक छ ? फौजीहरुमा...
पशुपति हामी जोगाउछौं
गणपतिलाल श्रेष्ठ काठमाडौं माघ– गणपतिलाल श्रेष्ठ नेपालका सम्पदाहरुको संरक्षणका लागि संघर्ष गरिरहेका जझारु युवा हुन् । उनले सम्पदा बचाऔं अभियान संघर्ष समिति गठन गरेर सो अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन् । वशन्तपुर दरबार क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने गरी पुरानो क्रिष्टल होटल भएको ठाउँमा बनिरहेको अग्लो भवनविरुद्ध लड्ने गणपतिकै समूह हो ।...
सिके राउत र सरकार दुवै राष्ट्रघातीः खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ प्रवक्ता, नेकपा
तपाईहरुले उठाउँदै आउनु भएको एकीकृत जनक्रान्ति भनेको के हो ? यो निकै गहन प्रश्न गर्नुभयो । यो एकीकृत जनक्रान्ति एक दुई वाक्य वा एकछिनको बसाईमा बुझिने कुरा होइन । यसलाई व्याख्या गर्न समय लाग्छ । सुन्ने धैर्यता पनि चाहिन्छ । तपाईहरुले बैज्ञानिक कार्यदिशा भनिरहनु भएको छ । कहिले अर्को शब्दावली प्रयोग गर्नुहुन्छ । जनता त झुक्किए नी त...
अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओ एसियाली देशको भ्रमणमा जादै
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्बजनिक
३ हजार ६ सय ३७ जना कोरोना संक्रमित थपिए
‘ठेला गाडा’ सार्वजनिक
छुट्टाछुट्टै स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा परी दुुई जनाको मृत्यु
धाकधम्की दिई चन्दा असुली गरेको अभियोगमा दुई जना पक्राउ
आइसिटी अवार्ड २०२० मा उत्कृष्ट पाँच जनाको घोषणा, कार्तिक १२ गतेदेखि पब्लिक भोटिङ शुरू हुदै
भरतपुर अस्पतालमा २ संक्रमितको मृत्यु
८ मंसिरदेखि सिटीईभिटीको परीक्षा, परीक्षा जुधेमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह